ကျောက်ကိုဘယ်လိုအရောင်တင်ရမလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကျောက်ကိုဘယ်လိုအရောင်တင်ရမလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-10-11 မူလ:ဆိုက်ကို
သင် H ကိုသိသလားကျောက်ကိုအရောင်တင်ပါ့မလားဒီဆောင်းပါးမှာမင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်နည်းလမ်းများစွာ။ သင့်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါက ကျေးဇူးပြု. ဤဆောင်းပါးကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဘုံလမ်းသည်ကြမ်းတမ်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ပုံဖော်ဖို့ Sandpaper,နှင့်ထို့နောက်သဲသို့ SEDPALE ကိုသုံးပါ။နောက်တစ်ခုရိတ်ရန် Kraft စက္ကူကို သုံး. နောက်ဆုံးတွင်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ရေနံကိုသုံးပါလုပ်ကိုင် ရတစ်လခန့်ကြာသည်။ Tသူ၏လမ်းသည်မလိုအပ်ပါပါဝါကြိတ်ကိရိယာကိရိယာသို့မဟုတ်Mini ကြိတ်စက်,သို့သော်ကျောက်တုံးကိုချောချောမွေ့မွေ့ပြုလုပ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာယူလိမ့်မည်။ သငျသညျလှပသောကျောက်တုံးကိုကောက်နှင့် polish ချင်လျှင်, ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမတညီတညွတ်တည်းရှိပါတယ်အသေးစားပါဝါကြိတ်စက်လက်မှာသင်သည်ဤလမ်းကိုကြိုးစားကြည့်ကောင်းလုပ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကျောက်ကိုအရောင်တင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့သုံးဖို့ဖြစ်တယ်လက်ကိုင် mini grinderသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ကြိတ် tool ကို။You သုံးနိုင်သည်different မော်ဒယ်များကြိတ်သူများfသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းကြိတ်, ထို့နောက်ဒဏ်ငွေကြိတ်ခြင်း, ထို့နောက်ဖယောင်း။ ဖယောင်း၏နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည် အိုးပွက်ပွက်ဆူနေသောနည်းလမ်းနှင့် blowtorch နည်းလမ်း။ အိုးပွက်ပွက်ဆူနေသောနည်းလမ်းသည်အိုးတစ်လုံးကိုအိုးတစ်လုံးကို အသုံးပြု. ဖယောင်းကိုထူးဆန်းသောကျောက်တုံးများအတွက်အသုံးပြုထားသောကျောက်တုံးသို့အရည်ပျော်သွားသည်။ Blowtorch နည်းလမ်းသည်ထူးဆန်းသောကျောက်တုံးပေါ်ရှိထူးဆန်းသောကျောက်တုံးပေါ်ရှိထူးဆန်းသောကျောက်တုံးပေါ်ရှိထူးဆန်းသောကျောက်တုံးများကို အသုံးပြု. ကြီးမားသောထူးဆန်းသောကျောက်တုံးများကိုအသုံးပြုသော Blowtorch နှင့်အရည်ပျော်စေရန်ဖြစ်သည်။
Waxing ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သည်ထူးဆန်းသောကျောက်မျက်နှာပြင်၏တောက်ပမှုနှင့်အရောင်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖယောင်းပြီးနောက် texture ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဒုတိယလုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံများနှင့်အရောင်များကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ဖြစ်သည်ပိုပြီးလှပသောစေရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျောက်မရှင်းလင်းပါကဤပုံစံကိုဖယောင်းဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုပုံစံကွက်ဖြစ်လိမ့်မည်အချို့သောကျောက်တုံးများကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေနှင့်အတူပက်ဖြန်းသောအခါရှင်းလင်းစွာ။
Hငါတို့သတိပေးချင်တယ်မဟုတ်အားလုံးအပေြာင်းထူးဆန်းတဲ့ကျောက်တုံးတွေကိုပွတ်သပ်သင့်တယ်။ ပုံကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်မူရင်းအသွင်အပြင်ကိုဆက်ထိန်းထားဖို့အကောင်းဆုံး,ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့pOlishing သည်၎င်း၏စုဆောင်းမှုတန်ဖိုးကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ သင်တစ် ဦး ကိုသုံးနိုင်သည်miniထောင့်ကြိတ်စက်disc ကို ဦး စွာဖြတ်ရန်, ထို့နောက်ကြိတ်ခွဲထားသော disc ကိုသုံးပါ, ပြီးနောက် polishing disc ကိုသုံးပါ။ လွယ်ကူပါတယ်အားဖြင့်ဤအလုပ်များလုပ်ဖို့လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်။
သင်သိပါလားကျောက်တုံးတစ်ပုံကိုပတ်ပတ်လည်ပုံသဏ္ into ာန်ထဲသို့မည်သို့ပွတ်သသနည်း။ ဥပမာ,သင်ကသို့လုပ်ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း။Thအီးလမ်းကသင် t ကိုသုံးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူဘောလုံးစက်နှင့်ပုတီးကြိတ်စက်.W၏အကူအညီ ithစက်နှစ်မျိုးကျောက်တုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလွယ်တကူဖွဲ့စည်းခဲ့သည်တစ် ဦး ကျောက်စိမ်းလက်ကောက်သို့မဟုတ်လည်ဆွဲအဖြစ်ပတ်ပတ်လည်ပုံသဏ္ round ာန်။ ဆုတောင်းပါow အပြောင်းအလဲနဲ့?ပဌမအားလုံးရဲ့,သင်အသုံးပြုသည်အဆိုပါပြိုကွဲစေသောကျောက်လုပ်ရန်တစ် ဦး ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့မဟုတ်စတုဂံထဲသို့ပြီးတော့ထို့နောက်အားဖြင့်ပတ်ပတ်လည်ပုံသဏ္ into ာန်သို့သူတို့ကိုကြိတ်သေးငယ်တဲ့ကြိတ်စက်.ကျောက်စိမ်းလက်ဝတ်ရတနာများကိုဤနည်းဖြင့်မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကအသုံးပြုကြသည်အထူးစက်လုပ်လေ၏လိုအပ်သောအရွယ်အစားရန်ဒီဇိုင်းများအရစိန်ကြမ်းတမ်းသောကျောက်စိမ်းများဖြစ်သောကျောက်စိမ်းပစ္စည်းများကဲ့သို့သောကျောက်စိမ်း, ကျောက်စိမ်းများနှင့်စသည်တို့သည်စျေးကြီးပြီးဖြစ်သည်
ပါဝါကြိတ်ကိရိယာကိရိယာ Mini ကြိတ်စက် အသေးစားပါဝါကြိတ်စက် လက်ကိုင် mini grinder သေးငယ်တဲ့ကြိတ် tool ကို ထောင့်ပါဝါကြိတ်စက် ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များ grinders mini ထောင့်ကြိတ်စက် သေးငယ်တဲ့ကြိတ်စက်